Ny Xiaomi Mi Band 3 mahatratra singa iray tapitrisa amidy | Androidsis
Xiaomi dia nanolotra vokatra marobe tamin'ny hetsika nataony tamin'ny 31 Mey. Anisan'izany ny fehin-tànana vaovao, ny Xiaomi Mi Band 3. Modely vaovao izy io, izay nanatsara ny lafiny sasany raha ampitahaina amin'ny taranaka teo aloha. Tamin'ny 5 Jona dia namidy tany Chine izy ary tato anatin'iny herinandro iny dia tena fahombiazana tamin'ny varotra.
Hatramin'ny 17 andro monja dia namidy singa iray tapitrisa tany China ny Xiaomi Mi Band 3. Zavatra efa nohamafisin'ny marika sinoa. Tarehimarika iray izay manambara mazava ny fahalianana misy amin'ity andian-tanana vaovao amin'ny firenena ity. Ary fahombiazana vaovao ho an'ny marika.
Satria zara raha mila 17 andro hahatratrarana io isa varotra io izy ireo. Ny singa an-tapitrisany dia mizara eo amin'ireo kinova roa an'ny Xiaomi Mi Band 3. Misy ny kinova miaraka amin'ny NFC ary ny iray hafa raha tsy misy io sensor io, io no mahasamihafa azy roa. Na dia tsy fantatray aza ny fomba fizarana ireo varotra ireo.
Fa ny tena izy dia tsy tokony hahagaga raha mivarotra tokoa izy ireo. Satria efa talohan'ny nanombohany, Ny Xiaomi Mi Band 3 dia nanangona famandrihana 610.000 tany Sina. Ka nahaliana ny besinimaro tao amin'ny firenena aziatika.
Ary miaraka amin'ireo tarehimarika fivarotana ireo dia mazava fa ny taranaka vaovao bracelet dia fahombiazana amin'ny firenenao. Ankoatr'izay, aryIty unitiona tapitrisa ity dia tratra tamin'ny 22 Jona, ka tamin'ity indray mitoraka ity dia nitombo ihany ny isany. Azo antoka fa hanome antsipiriany bebe kokoa momba ny varotra izy ireo atsy ho atsy.
Inona Tsy fantatsika hatreto hoe rahoviana no ho tonga eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny Xiaomi Mi Band 3. Andrasana ny hamoahan'izy ireo amin'ny fomba ofisialy ny marika. Fa ny tena izy dia mbola tsy manana daty manokana izy ireo. Ka mila hiandry ela kokoa isika.
PS: Azonao atao ny mitsidika ny lahatsoratray farany momba ity vokatra ity, ho ovay ny fitenin'ny Mi Band 3.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Ny Xiaomi Mi Band 3 dia mivarotra singa iray tapitrisa ao anatin'ny 17 andro
Ny Meizu 16 dia havoaka faran'izay haingana, hoy ny Tale jeneralin'ny orinasa
EMEET Office Core 2 famerenana